Umphumela Wokutholwa Nezingane | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 27, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngiyafunda UKevin EikenberryIncwadi, Ubuholi obumangazayo: Ukudalula ubuholi bakho obungaba nekhono elilodwa ngasikhathi futhi sizobe siphuza ikhofi noKevin kusasa. Yincwadi emnandi - futhi isahluko esisodwa singithinte ngempela kimi ukulwela ushintsho.
UKevin uxoxa ngoshintsho ngokuningiliziwe. Enye yezinkomba ezisetshenziswa nguKevin yincwadi ka-1962 ka-Everett Rogers, Ukwehliswa Kwezinto ezintsha. Kungumcabango omile isikhathi eside… unikeza ukuqonda ukuthi sibuthatha kanjani ubuchwepheshe. Ukuwohloka ngale ndlela elandelayo:
Okuthakazelisa nakakhulu kulapho ubuyekeza ukutholwa ngesilinganiso sesikhathi. Nawa amanye amasampula okwenziwa kwemisha:
Lokho kusho, anginaso isiqiniseko sokuthi ukhona oke waxoxa noma walinganisa umthelela webhizinisi lokutholwa. Esinye sezeluleko engizinikeza amaklayenti ukuthi, uma indlela yokusebenza seyifakazelwe kepha ingakaqhamuki, ithuba lokuba nomthelela ebhizinisini lakho likhulu. Njengoba isikhathi sihamba futhi amabhizinisi eqhubeka nokungakunaki ukwamukelwa, balahlekelwa amandla alowo mthelela. Nali ishadi lami lethiyori:
Ngibuke njengoba izinkampani zingena kusesekuseni kakhulu ezintweni ezintsha ezingavunyelwe futhi zacwila ithani lemali nokutshalwa kwezimali kulawo mateknoloji, kwalahlekelwa iningi lazo. Isibonelo esisodwa sanamuhla ukusebenzisa i-cloud computing. Abathuthukisi bokuqala nabasebenzisa ubuchwepheshe basebenzise izigidi futhi abazitholanga izinzuzo; kodwa-ke, bavule indlela yokufakazela ubuchwepheshe. Uma sekuqinisekisiwe, i-computing yamafu manje isibiza kakhulu futhi ikhula ngokushesha ekwamukelweni kwayo. Umthelela emabhizinisini asebenzisa i-cloud computing njengamanje mkhulu… kepha njengoba wamukelwa kuyo yonke imboni, ngeke usaba yinzuzo yokuncintisana - uzoba ngundabamlonyeni.
Njengoba ubukeza ukuxubana kwakho kokumaketha futhi uqhubeka nokuziba ukubaluleka kokuqukethwe, ukubhuloga kwebhizinisi, ukwenziwa kwezinjini zokucinga kanye nemithombo yezokuxhumana… ulahlekelwa yithuba lokujoyina iningi labamukeli elizothinta kakhulu ibhizinisi lakho. Ungaqhubeka nokulinda - impela yi Ephephile Indlela yokuphuma. Kodwa-ke, ungamangali lapho ukutholwa kwakho sekwedlule isikhathi kunomthelela omncane noma kungabi namthelela omncane ebhizinisini lakho. Eqinisweni, ungadinga ukwamukela nje ukuze uhlale uncintisana ezimakethe.
Njengomakethi nobuchwepheshe, ngikholwa ukuthi kubalulekile ukuthi izinkampani Qhubeka ngobuchwepheshe. Angisho ukuthi zonke izinkampani kufanele zamukele futhi zamukele kusenesikhathi. Engikubonisayo ukuthi izinkampani zibone amathuba okutholwa ngaphambi kwesikhathi nokuthi kungaba namuphi umthelela uma zisetshenziswa ezinkingeni zebhizinisi lazo. Wonke amabhizinisi anezinselelo futhi ubuchwepheshe obuvelayo bungaba yizixazululo ezisebenzayo zalezo zinkinga.
Isibonelo esijwayelekile: Uma uyibhizinisi elilwa nokumaketha okungenayo nokuthola imikhondo efanelekayo njengamanje, ukutholwa kwangaphambi kwesikhathi kufana nokukhangiswa kwezinjini zokusesha, ukuthuthukiswa kokuqukethwe (ukubhuloga kwebhizinisi) nokwandisa okuqukethwe kwakho kuye kumanethiwekhi afanele (ukuxhumana nabantu). Ngokwamukela kusenesikhathi, ungathola ukuqala kokuncintisana nabantu abancintisana nabo futhi uthole isabelo semakethe. Uma ulinda, uzobe wenza lokhu ukuze uqhubeke ngokuzayo… futhi isikhathi sakho sokuzuza sizobe sesidlulile.